Rant: Suuqa Burcad Badeedka ee Online | Martech Zone
Warshadaha muusikada iyo burcad badeeda, warshadaha filimada iyo durdurrada, wargeysyada iyo wararka internetka. Maxay waxaas oo dhami iskaga mid yihiin? Sahay, dalab iyo suuq wareegaya.
Anigu waxaan ahay taageere weyn oo hanti-wadaaga oo aan xoogaa u janjeero dhinaca libertarian-ka dhinaca siyaasadda. Waxaan aaminsanahay in suuqyada xorta ahi had iyo jeer helaan jihada saxda ah ee loogu dhaqaaqo. Mar kasta oo aan arko dowladda oo wax ka qabanaysa burcad-badeednimada, la wadaaga faylalka iyo tahriibinta ayaan qamarataa. Oo markasta oo aan arko dawladda oo difaacaysa warshad, waxoogaa waan sii yara faashanayaa. Waan guuleysanayaa maxaa yeelay ma aaminsani in suuqyada madow ay jiri lahaayeen haddii aysan ahaan laheyn ururada kaligood kaligood kaligood wax soo saarkooda iyo iyagoo difaacaya faa iidadooda faraha badan.
Internetka ayaa suuqa ka furay muusikada waana la buuxiyay. Markii aan yaraa, ma aanan ogeyn inay adduunka ku jiraan malaayiin fanaaniin ah. Suuqa kaliya wuxuu lahaa meel boqolaal ama kumanaan ah. Aniga ahaan waxay ahayd uun KISS. Hadda oo suuqa la furay, dalabku sidiisii ​​buu ahaaday laakiin kan sahaydu waa meel walba. Waa wax dabiici ah in la arko in qarashka muusiggu hoos u sii dhacayo inta alaabtu kordhayso.
Laakiin ma aysan sameyn. The qiimaha album isma bedelin 25 sano inkasta oo muusikada la yaabka leh ay jirto iyo sida fudud ee loogu qaybiyo websaydhka. Qofna ma cabanin markii miyuusigga miyuusigga ah uu iibinayo CD-yada boqol jibbaar kharashkooda. Iyo, iyadoo jilayaasha filimada, riwaayadaha iyo xiddigaha dhagaxa weyn ay muujinayaan Bentleys-kooda cusub, way igu adag tahay inaan wax uun ka damqado warshadaha. Haddii dadka daacadda ah ay wadaagayaan muusikada halkii ay ka iibsan lahaayeen, waxay ka dhigan tahay halista in la qabto ay ka culus tahay qiimaha muusigga. Dhibaatadu maaha dadka daacadda ah, muusigga, ama faylalka wax ka qorista… waa in miyuusiggu uusan ahayn sidii uu ahaan jiray.
Qolkeyga fadhiga waxaan ku leeyahay HDTV iyo qalabka dhawaaqa hareeraha oo aan ku ruxin karo guriga. Maxaan u bixinayaa lacag $ 12 tigidh filim ah iyo $ 10 salool iyo cabitaan markaan daawado filim qayb yar oo ka mid ah kharashka raaxada qolkayga aan ku noolahay? Lama jaan qaadi karo IMAX… waan ahay diyaar u ah bixinta dheeraad ah waayo-aragnimadaas. Warshadaha filimku maahan dagaal u dhexeeya burcad badeedda iyo shineemada filimka, ee waa dagaal u dhexeeya tiyaatarka guriga iyo shineemada filimka. Tiyaatarka guriguna wuu guuleysanayaa!
Haddii warshadaha filimku rajaynayaan inay guuleystaan, waxay hoos u dhigi lahaayeen qiimaha tikidhada shineemooyinka iyo cuntada, waxay ku dari doonaan xoogaa raaxo dheeri ah (laga yaabee cashada, khamriga iyo xoogaa cappuccino), waxaana la dhigaa fadhiyo wareegsan iyadoo la dhexgelinayo si aan habeen uga dhigo la saaxiibo. Ma soo dejisan karo taas waayo-aragnimo!
Waxaan aqriyay in wargeysyada ay isku dayayaan inay dhigaan darbiyada mushaarka mar kale. Waxaan u maleynayaa inaan tan soo marnay dhowr jeer… walina ma helin. Internetku waa macluumaadka superhighway… wargeysyada ayaa ah godadka. Wargeysyadu waxay adeegsadaan waxyaabo ay ku buuxiyaan godadka aysan ku iibin karin xayeysiisyada qaar badanna waxay ka quusteen qoditaanka qoto dheer si ay u helaan sheekada dhabta ah. Anigu lacag kama bixiyo joornaal maxaa yeelay aniga ka hel warar fiican khadka tooska ah, toos uga soco isha, bilaa xatooyo, iyo xayeysiis la'aan.
Haa hubaal, waan siiyay Daily.. isku day ay sameeyeen warshadaha wargeysku inay ku keenaan iPad-ka dhammaan kalsoonida aan lagu qabin wargeysyada. Waa gaabis, way shiraysaa, waana war dhif ah. Waa inay u yeeraan isaga Shalay! Laakiin, maadaama warku yahay warshad dhan, waxaa jira wax uun ay xaq u leeyihiin oo ay ka mudan yihiin meel ka baxsan xuduudaha hanti-goosadnimada taas oo u oggolaanaysa inay sii wadaan isku dayga ay ku kasbanayaan 40 boqolkiiba faa'iidada? Waan ka xumahay wargeysyadaBack kula noqo warbixintii fiicnayd dadkuna waxay bixin doonaan lacagta ku jirta.
Midkastoo kiisaskan ka mid ah, kuma eedeeyo macmiilka waxaanan u damqanayaa dadka sharciga jebiya. Si kastaba ha noqotee, kani maahan uun hanti-wadaag Marka kharashku ka bato rabitaanka, waxa kaliya ee haray waa suuq madow oo alaabta ama adeegga looga helo. Nasiib darrose, warshadahaani waxay u koreen si aad u weyn oo awood badan oo ay heleen siyaasiyiinta jeebkooda dambe inaad isku daydo inaad ka saarto sharciyada toddobaad kasta si aad isugu daydo inaad u joojiso dhiig baxa. Dadweynow… arintaan danbi ma ahan ee waa arin suuqa ku saabsan.
Marka loo fiirsho hadaladan, waxaad u maleyn kartaa inaan dhamaantiin ka hadlayo burcad badeednimada. Xaqiiqdii maya! Waxaa jira tusaalooyin aan la tirin karin oo ah alaabooyin iyo adeegyo isbedelay. Waana aaminsanahay in dadku ay bixinayaan waxyaalaha ay ka kooban yihiin sidii hore ay waligood u bixin jireen. Markii aan yaraa, waalidkay waxay lahaayeen taleefan, joornaal, telefishan madoow & caddaan, waxayna bixiyeen albumka vinyl-ka. Qaangaar ahaan, aniga ayaa iska bixiya taleefannada casriga ah, farriinta codka, barnaamijyada moobiilka, qorshe xog, qorshe fariin qoraal ah, (x qorshayaasha carruurtayda) telefishanka telefishanka, filimada loo dalbado, internet-ka ballaadhan, XBox Live, iTunes iyo Netflix.
Kuwani maahan wax yar oo tufaax ah oo xun oo loo qaatay dembi inta lagu guda jiro. Fursadda ayaa ah, qofka celceliska aad taqaano inuu burcad badeed yahay ama qaybinayo muusig ama filim. Marka fal dambiyeedka uu noqdo mid guud, dhibaatadu ma ahan dambiga… waa inaad bilowdaa inaad isweydiiso waxa cillada ku leh suuqa ee keena nooca jawaabta.
Qufulida nin abuuraya shabakad halka ay dadku wax ku qaybiyaan oo ay ku soo dejiyaan jawaabtu ma aha, sidoo kale. Waxaan ku soo marnay sidan Napster iyo Pirate Bay. Iyada oo Megauploads hoos loo dhigo, dhowr kun oo goobood oo kale ayaa halkaa jooga oo awood u siin doona hawsha. Kuwa ugu cusub ayaa ah shabakado gaar loo leeyahay oo meherado qarsoodi ah leh iyo isgaarsiin sir ah si aysan dowladuhu u quudhi karin. Burcad badeedda iyo suuqa xatooyada ee muusikada iyo filimada meelna ugama socdaan.
Waan ka daalay shirkadahaan sheeganaya inay lacag lumay warshaddu waxay ku jirtaa [qorista] jirada. Taasi waa been been ah. Dadkii xadi lahaa filim marna qorsheyneynin inay lacagta ku bixiyaan tiyaatarka. Kuma khasaarin lacag iyaga ay xadeen, lacag ayaa kaa luntay maxaa yeelay wax badan ayaad soo dalacday oo tiyaatarka gurigu wuxuu kaa laadayaa dabadaada.
Aniguna ha ii sheegin in dadku aysan bixin doonin waxa ku jira waxa keliya ee aan u ciirsi nahayna waa inaan qof walba xirno. Waxaan dhamaanteen bixinaynaa waxyaabaha maalinlaha ah! Qiimaha si fudud waa inuu u dhigmaa qiimaha. Dadku at Liiska Angie waxay cadeeyeen in reviews dib u eegista lacagta la siiyay ay tahay mid lagu kalsoonaan karo oo ay badbaadin karaan macaamiishooda kumanaan doolar. Liiska Angie wuxuu hayaa macaamiishooda oo aad bay caan u yihiin waxayna awood u yeesheen inay soo bandhigaan dadweynaha!
Suuqyadu way is beddelayaan oo warshadahahan kale MA AHAN kuwo la qabsi ah. Maxay arintaas uga dhigayaan arrin dambiyeed oo aysan uga dhigin mid dhaqaale? La soco dadaalka shirkadaha waaweyn si dambi looga galiyo in badan oo shabakadda ah adoo akhrinaya Boodhadhka 'Deeplinks' ee barta internetka ee 'Foundation Frontier Foundation'.
Tags: saac 1981kim dotcommegauploadsxafaayadburcad-badeednimadaburcad badeedbudhcad badeedgaarka ahbeertaxatooyo
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay: suuqyada madow ma jiri doonaan haddii aysan ahayn ururada kaligood kaligood kalifaya wax soo saarkooda. Waad ku mahadsantahay akhris wacan.
Arrintaan ma tagi doonto waqti dhow, nasiib darrose, warshadahaas riixaya xalka xun ayaa sidoo kale ku jira geeddi-socodka wasakheynta hadalka siyaasadeed, taasoo horseedaysa dadaallada sida SOPA, ACTA, iyo kuwa kale. Doc Searls ayaa dhowaan soo daabacday wax ku habboon dooda, oo mudan in la akhriyo. http://blogs.law.harvard.edu/doc/2012/02/29/edging-toward-the-fully-licensed-world/
Waan ka daalay shirkadahaan sheeganaya in lacagta ka luntay wershadaha ay ku jiraan jirrooyinka [geli]. Taasi waa been been ah. Dadkii xadi lahaa filim marna qorsheyneynin inay lacagta ku bixiyaan tiyaatarka. Kuma khasaarin lacag iyaga ay xadeen, lacag ayaa kaa luntay maxaa yeelay wax badan ayaad soo dalacday, tiyaatarka gurigana wuxuu kaa laadayaa dabadaada. ”
Xitaa ma sharixi karo inta aan ku raacsanahay bayaankan! Waa run 100%.